Oomatshini boMatshini-i-AOOD Technology limited
Oomatshini beshishini badlala indima ebalulekileyo ekufezekiseni imveliso ephezulu, ukusebenza ngokukuko kunye neendleko ezincinci. Kwezi nkqubo zintsonkothileyo zorhwebo, iindibano zeringi eshell kunye namalungu ajikelezayo asetyenziswa ngokubanzi ukwenza umsebenzi wokuhambisa amandla, idatha, uphawu okanye imithombo yeendaba ukusuka kwindawo emileyo iye kwinxalenye ejikelezayo. Ngokobunzima benkqubo, amakhonkco eslip kunye namalungu ajikelezayo anokudityaniswa.
I-AOOD ibonelele ngenkqubo yesiliphu yesiliphu koomatshini bemizi mveliso kangangeminyaka. Ungafumanisa ukuba i-AOOD isiliphu semisesane senza ugqithiso lombane kunye nolwe-elektroniki koomatshini bokwenza iwelding, khetha oomatshini bokubeka, ukupakisha oomatshini, izixhobo zokuphatha izinto, iingalo zerobhothi, iisemiconductors, izixhobo zebhotile kunye nezizalisayo, izixhobo zokulungisa ukutya, izixhobo zohlolo lwemibhobho, ukujikeleza kovavanyo iitafile, izixhobo zoxinzelelo, oomatshini bokushicilela kunye nabanye oomatshini abakhulu. Masiyenze icaciswe ziirobhothi, irobhothi inamalungu amabini aphambili, enye yingalo yeerobhothi kwaye enye isakhelo esisiseko.
Ingalo yerobhothi inokujikeleza i-360 ° simahla kodwa isakhelo esisisiseko silungisiwe kwaye sifuna ukuhambisa amandla kunye neempawu ukusuka kwisakhelo sesiseko ukuya kwiyunithi yolawulo lwengalo yerobhothi. Apha kufuneka sisebenzise isiliphu esisangqa ukusombulula le ngxaki ngaphandle kwengxaki yekhebula.
I-AOOD ihlala igcina uphando kunye nokuphuhlisa izisombululo ezitsha zesiliphu. I-AOOD eqengqelekayo-yokunxibelelana kunye nokungadibanisi amakhonkco esiliphu anokufikelela ixesha elide ukuhanjiswa okuthembekileyo phantsi kwesantya esiphezulu, i-mercury yokunxibelelana namasongo okufezekisa inokufikelela kugqithiso lwangoku oluphezulu kakhulu, njenge-AOOD 3000amp isinxibelelanisi sombane esijikelezayo soomatshini bentsimbi.
Iimveliso ezinxulumene noko: Ngokusebenzisa Imisesane yeSlip Bore, Imisesane yePancake Slip,Imisesane yeSlip System Slip